Kacsi la’aanta waa dhibaato keenikarta burburka qoyska…. | Gaaloos.com
Home » galmada » Kacsi la’aanta waa dhibaato keenikarta burburka qoyska….
Kacsi la’aanta waa dhibaato keenikarta burburka qoyska….
Waxaa kaloo keeni kara daawooyin loo qaato in lagu daweeyo cudurada qaarkood. Haddii dhibkaan aad isku aragtid waxaad u baahan tahay inaad u tagtid si laguu baaro ama lagaaga daaweeyo waxa keenay. Ogow dhibkan wuxuu noqon karaa calaamad cudur sida sonkorowga, dufanka dhiiga () oo badata ama dhiig-karka.
Title: Kacsi la’aanta waa dhibaato keenikarta burburka qoyska….